Malunga nathi - iKingtai Craft Products Co, Ltd.
Iimveliso zeKingtai Craft Co, Ltd.
Imveliso yobugcisa yaseKingtai, inkampani eyenziweyo yobugcisa bentsimbi, ebambe ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava emveliso eyahlukeneyo yobugcisa, ukuhlanganiswa kwayo ngokupheleleyo kwinkampani kunye nenkampani yorhwebo, yiyo loo nto sineqela loyilo kunye neqela loshishino.
Ukusukela oko yaqalayo, iiLayisensi kunye nelungelo elilodwa lomenzi wechiza esithe salifumana lingaphezulu kwamaqhekeza angama-30, aliqela kuwo iDisney, iWal-Mart, iHarry potter, i-Universal Studio, iSGS, i-FDA kunye ne-ISO9001.
Sinikezela ngemveliso yenkcubeko esemgangathweni, kubandakanya ii-keychains, imbasa, ibheji yokufaka, iimagnethi, umlinganiso wecephe kunye nokunye. Sinokuba bhetyebhetye kwiimfuno zeshishini lakho kwaye senze iimveliso ngokweemifanekiso zakho eziyilwe, iisampulu ezenziwe, kunye neemfuno ezineenkcukacha.
Ngaphezulu kweminyaka elishumi, sibe ngumthengisi kwiDisney, iWal-Mart, iHarry Potter kunye neeStudios zeNdawo yonke, Sithengisa iimveliso zethu ngqo ezivenkileni kwaye sithengisa kwakhona kwishishini kwihlabathi liphela, uluhlu lwethu olukhulu alusoze lusilele ukwanelisa iimfuno zabathengi bethu kwaye Ihlala ihlaziywa ukubandakanya inkqubela phambili yamashishini okuthengisa.
I-KingTai yanamhlanje isebenza ngenjongo yenkonzo yokuqala yabathengi, kwaye ithathe inxaxheba kuMboniso weCanton Fair naseHong Kong iminyaka emininzi. Sibonelela ngenkonzo enyanisekileyo kubathengi, kwaye sigcine izinto ezintsha sinokholo kwindalo yobomi obumnandi
Ke kutheni ungasizami? Siqinisekile ukuba siya kuba nakho ukuhlangabezana kwaye sidlule kuko konke okulindeleyo.
Yintoni enye esinokuyenza nge logo yakho?
Sinikezela ngeentlobo ngeentlobo zezikhonkwane ze-eel lapel ezikumgangatho ophezulu kunye nezikhonkwane zedijithali zokuprinta ngokujika okukhawulezayo. Yila ezakho izikhonkwane ze-enamel ezineelogo okanye uhambe ngokwesiko kunye neminyaka yenkonzo. Ngesixhobo sethu sokudibanisa umbala wePantone, siyaqinisekisa ukuba uyilo lwakho luyaphuma kunye nemibala ocinga ngayo.
Izikhonkwane ze-enamel zinokunikwa abasebenzi ukubonisa ukwamkelwa okanye amavolontiya ukubonisa umbulelo wakho. Iimveliso zethu zesiko zizinzile kakhulu ngomgangatho ofana nezacholo, ugqibelele ukunika njengesipho okanye uphawu kwinkampani yakho. Bonisa ikratshi lakho lase-USA ngezikhonkwane zethu zeFlegi yaseMelika. Ngaba ufuna ukusasaza ulwazi? Sibonelela ngezikhonkwane zeribhoni zokufa ezifayo, ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso umyalezo wakho okhethekileyo.
Ngoyilo lwakho, unokufumana iintlobo ngeentlobo zezinye iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngeodolo yakho. Ukusuka kwizitshixo, amakhubalo, kunye neecufflinks ukuya kumacici, iithegi zenja, iibhande zebhanti kunye neemedallion, sinesisombululo kuzo zonke iimfuno zakho zentengiso okanye amabhaso.
Izikhonkwane zesiko ziyafikeleleka kwaye kulula ukuyila. Ziyindlela elungileyo yokuvuza abasebenzi, amavolontiya kunye nabafundi, ukubonisa inkampani yakho nge logo, ukugcoba kwiqela lakho lezemidlalo, ukukhuthaza iklabhu yakho kunye nokuhlonipha amagqala! Izikhonkwane zeflegi zethu zenziwe ngeqhayiya kwi-CHINA Bhrawuza iifoto zethu zeefoto ukuze zikhuthazwe kwindalo yakho elandelayo.